Ampiasao ny Office Suite anao ao anaty rahona amin'ny OnlyOffice | Avy amin'ny Linux
Ny rahona dia amin'ny lamaody, fantatsika izany, ary ny orinasa lehibe toa azy Microsoft, dia mampakatra ny rindranasan'izy ireo lehibe hampiasaina amin'ny tambajotra. Ao amin'ny tontolon'ny automatisation Office, tsy isalasalana fa misy mpitarika roa lehibe: Google Docs sy Microsoft's Office Online, saingy hitako tamin'ny alàlan'ny Unixmen, safidy vaovao azontsika apetraka amin'ny mpizara anay manokana.
1 Inona ny atao hoe OnlyOffice?
2 Inona no omen'ny OnlyOffice antsika?
3 Fepetra takiana amin'ny fametrahana OnlyOffice
4 Mametraka ny OnlyOffice Online Editor
Inona ny atao hoe OnlyOffice?
OnlyOffice dia rindram-tranonkala open source izay ahafahantsika manangana sehatra fiaraha-miasa ho an'ny SME amin'ny mpizara anay manokana. Izy io dia mirakitra kinova Enterprise sy Community, ary mazava ho azy, amin'ity lahatsoratra ity dia holazaiko aminao ny fomba fametrahana ity farany amin'ny mpizara anay manokana.
Inona no omen'ny OnlyOffice antsika?
Fanaraha-maso ny asa- Ahafahantsika mizara ny antotan-taratasinay amin'ireo mpiara-miasa sy mpampiasa anay ivelan'ny vavahady, ary misy ny fanaraha-maso ny kinova sy ny fanitsiana feno.
Mpanonta antontan-taratasy an-tserasera: Azontsika atao ny manitsy ny tatitra momba ny fotoana tena izy, pejy ara-bola na fandraharahana miaraka amin'ireo mpampiasa hafa amin'ny endrika maro: PDF, TXT, DOCX, DOC, ODT, RTF, HTML, EPUB, XLS, XLSX, ODS, CSV, HTML, ary PPTX.
Tetikasa fitantanana: Afaka mampiasa isika tsangambato, lahasa ary subtasks hamaritana izay laharam-pahamehana eo amin'ny tanjontsika voalohany sy ny zavatra fanaontsika isan'andro. Azontsika atao ny mampiasa ny tabilao Gantt hahitantsika ny fivoarantsika amin'ireo lahasa voatendry isan-karazany, afaka hitantana ny fotoanantsika isika, ankoatry ny zavatra hafa.
CRM sy faktiora: Afaka mitantana angon-drakitra miaraka amin'ireo mpanjifanay izahay ary mamorona faktiora mivantana eo amin'ny lampihazo.
Mpanangona mailaka: Azontsika atao ny manampy ny kaonty GMail ohatra, mba hampifandray azy amin'ny sehatra. Azontsika atao ny manampy mpizara mailaka amin'ny alàlan'ny anarantsika manokana mba hamoronana boaty mailaka ho an'ireo mpikambana ao amin'ny ekipanay, ary izany rehetra izany dia ampidirina amin'ny sisa ampiasain'ny OnlyOffice.
Mandresy lahatra anao ve izany? Andao hojerentsika ny fomba fametrahana azy avy eo ..
Fepetra takiana amin'ny fametrahana OnlyOffice
Ny fametrahana ny OnlyOffice dia vita tamin'ny Ubuntu Server 14.04 tsy misy mpizara tranonkala napetraka. RAM 2GB, fikirakirana 2-core ary habaka kapila 40GB no aroso.
Rehefa apetrakao amin'ny fomba izay hasehoko etsy ambany fotsiny ny OnlyOffice, hapetraka ny Server Server. tsy ao anatin'izany ny Tonian-dahatsoratra amin'ny Internet. Mba hametrahana ny Editor an-tserasera dia tsy maintsy ampiana PPA hafa izay hasehoko taty aoriana, satria efa lany andro ireo fonosana izay ao amin'ny tahiry Trusty.
Raha nametraka izahay Apache, satria tsy maintsy esorintsika na ajanona izany, satria mampiasa ny lampihazo NGinx.
$ sudo apt esory ny apache2
Andao hanomboka. Manokatra terminal izahay ary mametraka:
$ sudo wget http://download.onlyoffice.com/repo/onlyoffice.key && sudo apt-key manampy onlyoffice.key
Rehefa vita dia manamboatra ny rakitra izahay /etc/apt/sources.list ary manampy izahay hoe:
deb http://download.onlyoffice.com/repo/debian potserina ny tena
Izao sisa no fanatanterahana:
$ sudo apt fanavaozana && sudo apt apetraka fotsiny ny varotra
Hanomboka ny fizotran'ny fametrahana, mangataka aminay tenimiafina ho an'ny MySQL. Rehefa vita izany dia afaka miditra amin'ny mpizara. Mila mametraka ny adiresy IP ao anaty browser fotsiny isika ary hivoaka zavatra toy izao:
Raha vantany vao vita izany, dia angatahina isika hisafidy tenimiafina, adiresy mailaka (mety) hisoratra anarana ny kaontintsika, ary afaka mifidy ny fitenin'ny sehatra sy ny faritry ny fotoana isika:
Ary rehefa vita izany dia hahazo ity isika:
Afaka manomboka miasa isika ary mankafy ny tombony nolazaiko teo am-piandohan'ny lahatsoratra, fa nilaza ihany koa aho fa tsy hanana ny Tonian-dahatsoratra an-tserasera.
Mametraka ny OnlyOffice Online Editor
Mitranga izany satria raha te hiasa ianao dia mila kinova avo kokoa momba ny mono, MySQL ary ny tranomboky sasany. Fa afaka mamaha azy mora foana isika.
Rehefa manavao sy mametraka ny Editor an-tserasera isika dia tsy afaka miditra amin'ireo fitaovana teo aloha
Manitsy ny fisie izahay /etc/apt/sources.list ary manampy izahay hoe:
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu matoky tena
Avy eo mamono izahay:
$ sudo apt-key adv --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF $ echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy main" | sudo tee /etc/apt/source.list.d/mono-xamarin.list $ sudo apt-mahazo fanavaozana
Vantany vao vita izahay dia manoratra:
$ sudo apt fanavaozana && apt hametraka MySQL-Server-5.6 MySQL-Common-5.6 MySQL-client-5.6
Raha vantany vao tafapetraka izany rehetra izany dia afaka miditra amin'ny mpamoaka an-tserasera amin'ny alàlan'ny URL izay nampiasainay taloha ihany izahay.
Ary dia izay .. 😉
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ampiasao ny Office Suite anao ao anaty rahona miaraka amin'ny OnlyOffice
Tsy hanome ahy olana amin'ny LAMPP ve izany? : /
Manoro hevitra anao aho mba hanandrana serivera vaovao .. na tsy mila fikirakira maro .. 😉
Toa tsara loatra!
castarco dia hoy izy:
ny andro hafa dia nanontany tena aho raha hametraka na tsia ity rafitra ity. Saingy manana fisalasalana kely aho
Tena mahatratra 40GB ve ity rafitra ity? sa noho ianao tsy maintsy misintona an'i Mono…?
Mora azo amboarina ve izy io? Efa manana virtoaly marobe amin'ny serverako aho, ary tsy tiako hipoaka tampoka ny fametrahana azy rehetra.
Mamaly an'i castarco
Eny, ho an'ny habaka amin'izao fotoana izao an'ny 40GB dia manana 1.5Gb fotsiny aho. Heveriko fa ny habaka dia rehefa manomboka apetraka ny rakitra sns. Satria manana safidy maro ny tontolon'ny fitantanan-draharaham-panjakana, tsy haiko raha ampy amin'izay ilainao.
Virtoaly marobe amin'ny mpizara iray ihany no tsy fomba fanao tsara, mba hialana amin'ny olan'io fomba io dia misy ny virtualization na kaontenera.
@mono, fantatro fa tsy fampiharana tsara izany. Saingy ho an'ny fampiasan'izy ireo manokana izy rehetra, ary vazivazy ny mpizara, mandeha amin'ny Atom izy io.
Fantatro fa raha misy lavaka manan-danja amin'ny iray amin'ireo virtual virtual dia afaka mamily azy rehetra izy ireo, saingy tsy handany vola bebe kokoa amin'ny mpizara tsara kokoa aho, ary tsy handrava ny zava-bita amin'ny alàlan'ny milina virtoaly na kaontenera LXC. Ny Atoma dia tsy manome be loatra an'ny tenany.
Herjo dia hoy izy:
Ary tsy misy pejy manolotra serivisy miaraka amin'ity sehatra ity?
[Offtopic] xD Raha milalao clash of clan ianao dia manasa anao ho any amin'ny fianakavian'ireo linuxers antsoina hoe! LinuxClan hidira.
Valiny tamin'i Herjo
manuelperezf dia hoy izy:
Azoko io lesoka io rehefa manandrana mametraka ny-sql 5.6 aho
MySQL-server-5.6: miankina amin'ny: MySQL-server-core-5.6 (= 5.6.19-0ubuntu0.14.04.1) fa tsy hametraka
Mamaly an'i manuelperezf
toa izao raha mametraka. Handramantsika izany
Napetraka izy io, saingy aorian'ny fametrahana ny MySQL 5.6, very ny fidirana ary tsy mitondra na inona na inona mihitsy izy io.
Ary azo atao ve ny mametraka azy amin'ny alàlan'ny MariaDB ho mpitantana fa tsy MySQL? Fantatro fa ny MySQL dia tena voadidy noho ny fampielezana antsika manokana ho safidy hafa nefa tsara raha toa ka mampiasa hacks sy tranga hafa amin'ny fikirakirana aza i MariaDB mba hahazoany toerana bebe kokoa; Raha tsy izany dia tsy misy
Ataoko fa nitovy io. Tsy mila manondrana ireo tahiry fotsiny ianao, apetraho MariaDB ary ampidiro .. amin'ny teoria
ArmandoF dia hoy izy:
Noraisiko izy ary napetako tamin'ny CT tao amin'ny proxmox Narahiko ny dingana rehetra ary tsy hitako mihitsy ny tonian-dahatsoratry ny tranonkala, lazao amiko hoe rahoviana isika no afaka hiaraka hahitana raha manondrana ny CT miaraka amin'ny Office efa napetraka hatramin'ny faran'ny habeny
Valiny amin'i ArmandoF
Rafael Aguilar placeholder image dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, fandraisana anjara lehibe amin'ity fitaovana ity.
Te-hahafantatra aho hoe aiza no nahazoanao ny URL an'ny repo Debian, tiako ho fantatra raha misy izany ho an'ny CentOS / RHEL 5 na 6.
Ho an'ny ambiny, heveriko fa mihatra ny dingana sisa, manova ny lahatahiry ilaina, sa tsy izany? misy torohevitra ve?
Valiny tamin'i Rafael Aguilar
Salama misy fomba hametrahana azy amin'ny debian 7, manandrana aho fa milaza amiko fiankinan-doha tsy afa-po
Valiny tamin'i Pipo
Salama, manaraka ny dianao aho fa tsy mihetsika ny tonian-dahatsoratry ny Internet, afaka manampy ahy ve ianao?
Ny fametrahana ny Editor an-tserasera dia ankoatry ny zavatra hafa rehetra .. mila manao izay apetrako amin'ny ampahany farany fotsiny ianao ..
Ny olona dia manao zavatra mitovy amin'ny tutor miaraka amn'ny mpizara ubuntu iray ihany, fa ny dingana farany azoko noho ny lesoka fiankinan-doha MySQL-server-core-5.6 tsy hita, efa nojereko sy novaiko ary tsy nisy nahita an'io fonosana io
Tsy misy fomba miaraka amin'ny mpamoaka lahatsoratra:
- Manomboka amin'ny fametrahana madio an'ny Ubuntu Server 14.04.02 aho
- Ny fonosana SSH Server sy Mail Server ihany no apetrako amin'ny fametrahana
- Manaraka ny torolàlana momba ny taratasy aho. Na dia talohan'ny editor aza, tsara. Miditra aho, manamboatra sy manao zavatra hafa rehetra.
- Amin'ny fanarahana ny torolàlana ho an'ny tonian-dahatsoratra. Rehefa mametraka ny MySQL kinova 5.6 dia mamaha ny OnlyOffice iray manontolo. Ok, mametraka indray aho ary:
apt-mahazo mametraka installer ihany
onlyoffice: Miankina: MySQL server fa tsy hametraka
apt-mahazo apetraka ihany ny server MySQL MySQL server
mysql-client: Miankina: MySQL-client-5.5 fa tsy hametraka
mysql-server: Miankina: MySQL-server-5.5 fa tsy hametraka
Manomboka eto dia tsy avelako hametraka OnlyOffice aho raha tsy miaraka amin'ny MySQL amin'ny kinova 5.5.
Heveriko fa ny olana dia mametraka ianao:
Na izany aza, ny zava-nitranga mitovy amiko ihany no nitranga ary tsy nanana fomba hamerenako afa-tsy ny birao ihany aho, tsy maintsy namorona ny MV indray aho avy hatrany. Angamba misy vahaolana, fa noho ny hakamoana dia tsy hitako. Ny zavatra mahatsikaiky momba an'io dia ny hoe mampiasa zavatra iray ianao, na ny iray kosa ampiasainao, na amin'ny fotoana tsy azo atao izany.
Eny ..., ny zava-mitranga dia ny fametrahana an'izany, mandamina ahy be amin'ny MySQL. Na izany na tsy izany, mijanona eo amin'ny kinova 5.6 ny zavatra fandaminana. Indrindra miaraka amin'ny lohahevitra InnoDB, izay tsy voaravaka endrika.
Raha sendra sendra olona io dia hitako ny vahaolana eto:
Na ahoana na ahoana, miaraka amin'ny kinova 5.5 ny editor dia tsy mandeha.
ara-nofo dia hoy izy:
Araka ny pejy sy ny forum http://dev.onlyoffice.org/ dia manolo-kevitra ny hametraka ny mpizara vondrom-piarahamonina (ny voalohany), amin'ny milina iray ary ny mpizara antontan-taratasy (ny faharoa) amin'ny milina hafa, misy ao amin'ny trano fitahirizana voalaza etsy ambony
Etsy ankilany, manome sosokevitra anao aho ny hampiasanao docker amin'ny fametrahana ireo serivisy roa, sarotra io amin'ny voalohany, fa avy eo azonao ilay izy,
Salama, nanaraka ny mpitari-dalana anao aho .. ary vitako ny nametraka azy. Fa rehefa handeha hametraka ny tonian-dahatsoratra an-tserasera aho ary manontany ahy ny mailaka handefasana ahy ny solonanarana sy ny teny miafiko dia miditra amin'ny mailako aho: acoguemovil@gmail.com ary tsy misy hafatra tonga aty amiko….
Efa olana amin'ny fanahafana Postfix izany, ka afaka mandefa hafatra amin'ny Internet. Ny zavatra mahazatra indrindra (sy tsotra) dia ny fametrahana azy io ho "internet + smarthost". Tonga any:
Ary avy eo dia mila manamboatra ny fanamarinana ny kaonty izay hampiasaina handefasana ireo hafatra ianao. Ity misy torolàlana:
Renato apaza dia hoy izy:
Salama, voalohany indrindra dia miarahaba anao amin'ny tutorial, faharoa, nanaraka ny dingana fametrahana aho fa rehefa nanomboka ny fampiharana dia nivoaka ny hafatra "502 Bad Gateway." Misy hevitra maninona? misaotra
Valiny tamin'i Renato Apaza
Ahoana ny fanarahako ny fametrahana ao amin'ny ubuntu fa manome lesoka fiankinan-doha amiko rehefa apetraka ny zava-drehetra.